Ibhizinisi - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
Okufanele Ucabangele Lapho Ukhetha Isifaki Sephaneli Yelanga Yendawo yokuhlala
Ukuthola abantu abafanele ukufaka amaphaneli elanga kudinga ukwazi izinketho zakho. Nakhu okufanele ukucabangele lapho ukhetha isifaki sephaneli yelanga yokuhlala. Cishe i-46% yabanikazi bezindlu base-US bahlela ukusebenzisa amandla elanga ezindlini zabo. Ziningi izinzuzo zamandla elanga, njengokunciphisa izikweletu zakho zamandla kanye nokwehlisa ikhabhoni yakho... Funda kabanzi
Uma kuziwa ekuthengeni izinto ezinkulu, ufuna ukuqiniseka ukuthi utshalomali lwakho ngeke lumoshe ngenxa yobudedengu bomthengisi. Ngendlela efanayo, abakhiqizi banoma yimuphi umkhiqizo onenani eliphezulu bayakhuthazeka ukuthi bagcine izinga elithile lobuhle ngoba liqinisekisa ukuthi amakhasimende abo abalulekile azo... Funda kabanzi
Izindlela Zokudala Zokwenza Isitayela Umbhede Wakho
Ingabe uyagula ngokungena egumbini elilodwa lokulala elibuthuntu kaningi? Uma yebo kufanele uvule amehlo akho kulokhu okuthunyelwe. Ikamelo lakho lokulala liyindawo yakho yangasese lapho ungaphumuza khona futhi uhlehlise ngemva kosuku olugcwele umsebenzi. Futhi ngaphezu kwakho ukugona embhedeni owenziwe kahle ... Funda kabanzi
Izinzuzo Ezi-4 Ezimangalisayo Zokulungiswa Kwe-Compressor Yezimboni
I-Air Compressor iyithuluzi elihle kakhulu eliguqula izinjini zikadizili, izinjini zikagesi, noma zikaphethiloli zibe amandla agcinwe emoyeni onomfutho. Isetshenziswa kakhulu amabhizinisi amancane noma izimboni ezizinze kahle ukuguqula amandla abe amandla. Njenganoma yimuphi omunye umshini osebenzayo, ukulungiswa komshini kuba yisici esiyinhloko okufanele sicatshangelwe, futhi kuma-compressor komoya, ilungelo... Funda kabanzi
Ukuqonda Inqubo Yokudluliswa Kokulahlekelwa
Ukuqonda amalungelo enkampani yenethiwekhi ukubuyisela amadola angaphansi ngesikhathi sesimangalo esibhekene nenqubo kuwukulungisa okuyisisekelo kufomula yokutakula emsebenzini wangaphandle. Ilungelo lenkampani yenethiwekhi lokubhaliswa ngaphansi kwe-New York livikelwe ngaphansi kweSigaba 29 soMthetho Wesinxephezelo Sabasebenzi BaseNew York. Lapho umshwalense wokunxeshezelwa kwabasebenzi ukhona... Funda kabanzi
Lungiselela Ukusuka: Amathiphu angu-6 Okweqa ukuqala Ibhizinisi Lakho Eliku-inthanethi
Eminyakeni yamuva nje, umhlaba ubone ushintsho olukhulu ukusuka endaweni ebonakalayo ukuya endaweni ebonakalayo. I-inthanethi isiphenduke isizinda esikhulu sokuxhumana kwabantu nabantu abaningi abathembele ezinkundleni zokuxhumana ngezinhloso zomuntu siqu nezebhizinisi. Ukungena kwi-e-commerce manje kulungele osomabhizinisi abasafufusa. Ngamasu alungile aseqaliwe,... Funda kabanzi
amafulege ngokwezifiso, amafulegi ngokwezifiso 3x5
Ungalethula Kanjani Futhi Umakethe Ibhizinisi Lakho Lokwengeza
Njengomuntu oshisekayo ngempilo nokuzithuthukisa, izithasiselo zingaba indlela enhle kakhulu yokwabelana ngothando lwakho nomhlaba ngendlela ebasiza ngempela ukuthi bahlakulele ushintsho abalufunayo. Kodwa-ke, ukuqhubeka nenqubo yokuqala nokudayisa ibhizinisi lakho lezengezo kungase kubonakale kuyinselelo enzima... Funda kabanzi
call centre cloud solutions
Izindlela ezi-5 zeBlockchain Technology Iguqula Imboni Yezokuthumela
Naphezu kwamazinga anyukile ohwebo lwamazwe ngamazwe, ukuthunyelwa kwemikhumbi kusagcina izinqubo zamaleja asendulo. Izinkontileka zokuthengisa, izikweletu zempahla, izivumelwano zezinkampani eziqashayo, nokunye ukusebenza kwebhizinisi okuhlobene kusancike kakhulu emalini enkulu yamadokhumenti namaphepha. Le ndlela yendabuko yokuphathwa kwedatha ayidli isikhathi kuphela futhi ijwayele ukwenza iphutha lomuntu, kodwa ... Funda kabanzi
Ubuchwepheshe beBlockchain, ubuchwepheshe be-blockchain buchaziwe, Buyini ubuchwepheshe beBlockchain
Izindlela Ezi-3 Ezilula Zokubonisa Ukubonga Umphathi Wakho
Ezicini eziningi, ukuba umphathi kungaba okuhlangenwe nakho okungabongi. Njengoba isiko elidumile lenze abaphathi baba yizinto zokuklolodelwa nokuhlekwa usulu, kulula ukubona ukuthi kungani abantu abaningi bebheka abaphathi nabanikazi bamabhizinisi ngendlela ephansi kangaka. Yize kuyiqiniso ukuthi kukhona abaphathi ababi laphaya, abaningi... Funda kabanzi
Indlela Ochwepheshe Abagcina Ngayo Ulwazi Lwakho Oluyimfihlo
Awudingi ukufunda iphephandaba isikhathi eside ukuze uthole enye futhi indaba yokuthi inkampani enkulu noma iqembu lezepolitiki laba yisisulu somgebengu. Yize lezi zinhlobo zezindaba zithola ukunakwa kwemithombo yezindaba, amabhizinisi amancane angaba yizisulu eziheha kakhulu kubageli ngoba... Funda kabanzi
1 2 ... 8 IZITHUBA EZINDALA